Tendrombohitra Oliva - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Analanoliva (tendrombohitra))
Ny Tendrombohitra Oliva amin'izao fotoana izao
Ny Tendrombohitra Oliva na Tendrombohitra Analanoliva dia havoana eo atsinanan'i Jerosalema izay mahatratra 823 m ka ny manasaraka azy amin'i Jerosalema dia ny lohasahan'i Kidrona. Avy amin'ny fisian'ny voly oliva ao amin'ny ilany andrefana ao Getsemane izany anarany izany. Toerana manana ny lanjany eo amin'ny fivavahana jiosy sy kristiana ary silamo io tendrombohitra io.
Toeram-pandevenana hatry ny ela ny Tendrombohitra Oliva satria ny Jebosita dia nandevim-paty tao tamin'ny taonarivo faha-2 tal. J.K. Nanohy izany koa ny mponin'i Jodà ka manao lavabato hatao fandevanana. Amin'izao fotoana izao dia maro ireo trano fiangonana miorina eo amin'ny Tendrombohitra Oliva.
Ho an'ny Jiosy[hanova | hanova ny fango]
Toeram-pandevenana eo amin'ny Tendrombohitra Oliva
Tamin'ny andron'i Davida dia toeram-panaovana sorona io tendrombohitra io. Mbola mijanona ho toeram-pandevenana izy mandraka ankehitriny ho an'ny Israelita. Toeram-pandevanana jiosy lehibe indrindra eran'izao tontolo izao ny Tendrombohitra Oliva. Resahina ao amin'ny Testamenta Taloha ny Tendrombohitra Oliva raha naminany ny amin'ny fitsanganan-ko velona sy ny Fitsarana farany ny mpaminany Zakaria (Zak. 14.1-4). Araka ny lovantsofina jiosy dia handalo eo amin'ny Tendrombohitra Oliva ny Mesia izay hahatonga ny fitsanganan'ny maty ho velona alohan'ny hidirany ao Jerosalema (Zak. 14.4). Ireo olona milevina ao no hitsangana voalohany. Izany faminaniana izany dia resahin'i Flavio Josefa ao amin'ny Antiquitates Judaicae.
Ho an'ny Kristiana[hanova | hanova ny fango]
Flevit super illam ("Nitomany azy Izy"), nataon'i Enrique Simonet, taona 1892. Nitomany an'i Jerosalema teo amin'ny Tendrombohitra Oliva i Jesoa.
Voaresaka matetika izy ao amin'ny Testamenta Vaovao, indrindra ao amin'ireo Filazantsara sy ao amin'ny Asan'ny Apostoly, amin'ny fitantarana ny fahorian'i Jesosy taorian'ny namadihan'i Jodasy azy. Toerana anaovan'i Jesosy toriteny matetika ny Tendrombohitra Oliva araka ny Testamenta Vaovao. Ny Filazantsaran'i Lioka sy ny an'i Marka ary ny Asan'ny Apostoly (Asa. 1.9-12) dia milaza fa tao amin'ny Tendrombohitra Oliva no niakaran'i Jesosy tany an-danitra. Ahitana fanorenana kristiana maro koa ao amin'izao fotoana izao: bazilika, trano fiangonana, monastera sns.
↑ 1,0 et 1,1 "Oliviers, mont des" - Microsoft Encarta 2009. 1993-2008 Microsoft Corporation.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tendrombohitra_Oliva&oldid=969840"
Voaova farany tamin'ny 6 Aprily 2019 amin'ny 11:46 ity pejy ity.